ဒီနေ့ ဟိုသွား ဒီသွား ဂူဂဲလ်နဲ့ ဟိုရှာဒီရှာ လုပ်ရင်းနဲ့ Suboo မှာ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ကဗျာကို သွားတွေ့ တယ်။ ကဗျာအောက်မှာတော့ သူ့ နာမည် (Nyi Min Zet)ကို ထိုးထားတယ်။ ကဗျာအစမှာတော့ "အချစ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေ ... ပင်ပင်ပန်းပန်းရေးထားတာမို့ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းလေးဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။" တဲ့။ ကျွန်တော် အောက်တိုဘာ ကတည်းက ရေးထားတဲ့ အချစ်ဆိုတာ ဆိုတဲ့ ကဗျာပါ။ အချစ်အကြောင်းတွေ ရေးဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် tag ကြတဲ့ ကာလပါ။ မနေ့ကတောင် ဗယ်လင်တိုင်း အမှတ်တရ ပြန်တင်လိုက်သေးတယ်။
ကျွန်တော့် original ကဗျာကတော့ ဒီမှာပါ။
အဲဒီ့လူရဲ့ လင့်ခ်က http://www.mysuboo.net/index.php?option=com_blog&name=NyiMinZ&task=view&pid=19674 ဒီမှာပါ။ သူ့ ရဲ့ အဲဒီ့ ပို့ စ်မှာ ကွန်မန့် ပေးလို့ မရအောင်လည်း ပိတ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ တခြားပို့ စ်ကျတော့ ရတယ်ဗျ။ သူက ကဗျာအကြောင်းရေပေါင်း များစွာထဲက သုံးကြောင်းလောက်က ကျွန်တော်နဘေယူထားတဲ့ဟာတွေကို လည်း လျှောက်ပြင်ပြီး ဖျက်ဆီးပစ်သေးတယ်ဗျ။
အဲဒီ့လူက ကဗျာအဆုံးမှာ ဘာရေးထားသလဲဆိုတော့ “အချစ်ရဲ့ definition လေးပေါ့ဗျာ။ ခံစားနိုင်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ မကောင်းလည်း သည်းခံဖတ်ပေးကြပါဗျာ။....” တဲ့။ ကဗျာကို ကူးယူပြီး ဖျက်ဆီးယုံတင်မက လူကိုပါ စော်ကားလိုက်သေးတယ်ဗျာ။ (ကဗျာကို ဖော်ပြရုံနဲ့(ကိုယ့်နာမည် မပါတောင်) ကျွန်တော်က စွပ်စွဲမယ့်သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုက သူ့နာမည်တပ်လိုက်လို့ ရယ်၊ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်လို့ ရယ်ပါ။)
ဘာလို့ အဲလိုလုပ်ကြလည်း မသိဘူးဗျာ။ သူများရေးတဲ့ ကဗျာနဲ့ ပီတိကော ဖြစ်ကြသေးလား။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ကဗျာတွေ ယူသုံးကြတာ တော်တော်များများ တွေ့ ဖူးပါတယ်။ နာမည်မပါရင်တောင် ကျွန်တော် ဘာမှပြောလေ့ မရှိဘူး။ ဒီအတိုင်း မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး တစ်ခါ တစ်ခါ ထွက်သွားတယ်။ တစ်ခါ တစ်ခါ လည်း “ အဲဒါ ကျွန်တော့်ကဗျာလေးပါ၊ ဖြန့် ဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်” ဆိုပြီး အသိပေးခဲ့တယ်။ နာမည်ပြန်တပ်ပေးဖို့ တောင် မတောင်းဆိုဘူး။ ခုလို သူ့ နာမည်တပ်ပြီး လုပ်လိုက်တာ စော်ကားလိုက်တာတော့ လွန်လွန်းတယ်ဗျာ။
မှတ်ချက်။ ကျွန်တော့်ကဗျာတွေကို ကြိုက်ရင် အချိန်မရွေး ခွင့်မတောင်းပဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယူသုံးလို့  ရပါတယ်။တစ်နေရာရာကရပြီး ရေးသူမသိလို့နာမည်မတပ်ရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ။ ဘယ်ကနေရတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြထားရင် ဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ အီးမေးလ်ထဲကနေ၊ ဘာညာပေ့ါ) ကိုယ်မရေးပဲနဲ့ ကိုယ်ရေးသလို လုပ်ပြီး “မကောင်းလည်း သည်းခံဖတ်ပေးကြပါ” ဆိုပြီး စော်ကားတာတော့ အရမ်းလွန်လွန်းတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် ပြောဖို့ တစ်ခုကျန်သွားသေးတယ်ဗျ။ ဒီ အချစ်ဆိုတာ ကဗျာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လလယ်လောက်ကတည်းက Suboo မှာပဲ တစ်ခြား တစ်နေရာမှာ တွေ့ ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်နာမည် တပ်မထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Label မှာ fromasite လို့ ရေးထားလို့ ကျွန်တော် "ကျွန်တော့် ကဗျာလေးကို ဖြန့် ဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ နှစ်သက်ကြောင်း သိရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။" ဆိုတဲ့ ကွန်မန့် နဲ့ original link ကိုပဲပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ လင့်ခ်ကတော့ ဒီမှာပါ။ http://www.mysuboo.com/component/option,com_blog/name,mysister/task,view/pid,7814/Itemid,/fonts/index.php?option=com_blog&name=pingpong&task=view&pid=17473
Fromasite ဆိုတဲ့ label အရ သူကိုယ်တိုင်ရေးတာ မဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံထားပြီးဖြစ်လို့ ပြသနာမရှာခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကဗျာကို နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်အနေနဲ့ တောင် pingpong ဆိုတဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်ပါသေးတယ်။ အပေါ်ကလူ (စုဗူးက Nyi Min Zet)ကတော့ သူရေးတာလုပ်ပစ်ရုံသာ မက ကဗျာကိုပါဖျက်ဆီးပစ်ပါသေးတယ်။
ကိုယ့်ကဗျာဘယ်မှာ တွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ ရှာတဲ့ နည်းကတော့ ဒီလိုပါ။ အကုန်တော့ တွေ့ မယ် မထင်ဘူးဗျာ။ ခေါင်းစဉ်က စပြီး ကော်ပီလုပ်ပြီး တကြောင်းချင်း ဂူဂဲလ်မှာ မြန်မာလို ထည့်ရှာကြည့်ပါ။ တစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်း result တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခုနက ရတဲ့ လင့်ခ်နှစ်ခုက ကျွန်တော် နှစ်ကြောင်းလောက်ပဲ ရှာကြည့်ပြိး တွေ့တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်လုံး လုပ်နိုင်ရင် စိတ်အချရဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ ဒီနည်းက ကိုယ်သူများကဗျာကို နှစ်သက်လို့ မျှဝေခွင့် တောင်းချင်တဲ့အခါ ပိုင်ရှင်ရှာဖို့ အတွက်လည်း အသုံးတည့်ကောင်း တည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ font တွေက သူခိုးအဖမ်းရ နည်းနည်း ခက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်တော့ စာတစ်ကြောင်းလောက်ကို ကော်ပီကူး double quote ထဲ ထည့်ပြီး Google မှာသာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ အတိအကျကြီးကို ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာစာကို double quote ထဲထည့်ပြီး ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုမှ ကျမှာ မဟုတ်တော့ပါ။ မြန်မာစာမှာ double quote ထဲထည့်ပြီးရှာလို့ မရပါ။
မူရင်းကဗျာလေး အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အချစ်ဆိုတာ တစ်လုံးတည်းနဲ့ ရသစုံနေတဲ့ သစ်သီး
အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားကို ထထခုန်စေတဲ့ ပစ္စည်း။
အချစ်ဆိုတာ လစ်ပိုတွေ အပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ အဏ္ဏဝါ
ချစ်သူ့စကားနဲ့ ဒုက္ခတွေကို ပစ်ပေါက်လိုက်မယ် အဖန်တရာ။
အချစ်ဆိုတာ လူပျင်းတွေကိုတောင် တင်းပေးနိုင်တဲ့ သံပတ်
အချစ်ဆိုတာ အထီးကျန်နေသူတွေရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ်။
အချစ်ဆိုတာ မမြင်နိုင်တဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပျံသန်းနေတဲ့ လေတံခွန်
အချစ်ဆိုတာ ကဗျာမျိုးစေ့တွေ စီးဆင်းလာတဲ့ ရေတံခွန်။
အချစ်ဆိုတာ ရေယောင်ဆောင်ပြီး ကြည်လင်နေတဲ့ ဂျင်အရက်
လူတွေကို ယစ်မူးစေနိုင်ခဲ့တယ် အစဉ်အဆက်။
အချစ်ဆိုတာ နှုတ်ခမ်းလေးထဲက ခုန်ပေါက်ထွက်လာတဲ့ သကာ
အချစ်ဆိုတာ ထမင်းပြီးရင် အရေးအကြီးဆုံးသော အစာ။
အချစ်ဆိုတာ လျှာဖျားစက်ရုံတော်က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ သကြားချိုချို ဖြစ်ပါသလား။
အချစ်ဆိုတာ ပါးစပ်ဖျားပေါ်မှာတင် တစ်သွားတဲ့ မေတ္တာတရား။
အချစ်ဆိုတာ မပျောက်ချင်လို့တမင်တကာ မွေးထားလိုက်တဲ့ အနာ
အချစ်ဆိုတာ အချိန်တွေပေးပြီး ကျင်ယူထားရတဲ့ ရတနာ။
အချစ်ဆိုတာ အရေးတကြီး အဟောခံခဲ့ရတဲ့ တရား
အချစ်ဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ အနူးညံ့ဆုံးသော အမှား။
အချစ်ဆိုတာ အရာရာကို တော်လှန်ရဲတဲ့ သူပုန်
တစ်ချို့ ကျတော့လည်း မိဘစကားဆိုတဲ့ ပုဝါဟောင်းကြီးတွေကို ခြုံလို့ ။
အချစ်ဆိုတာ တစ်ချို့ မိန်းမသားတွေ အတွက်တော့ ထမင်းတစ်လုတ်
တစ်ခါတစ်ခါ သူတို့ ကို ခေါင်းခေါက်ရွေးနိုင်မယ့် ဒေါ်လာတစ်ဆုပ်။
အချစ်ဆိုတာ ကောင်မလေးတွေ အရမ်းကျွမ်းတဲ့ ဂဏန်းသချာင်္
ပုရိသတွေကို ချိန်တွယ်ပစ်မယ့် အံ့မခန်းပညာ။
အချစ်ဆိုတာ အရည်မမီလို့ အပယ် ခံလိုက်ရတဲ့ ဆန်ကွဲ
အချစ်ဆိုတာ ဖန်ထည်ထက်တောင် ကွဲအက်လွယ်တဲ့ အသည်း။
အချစ်ဆိုတာ ကြိတ်ပြီးတဲ့ အခါ အချိုကုန်သွားတတ်တဲ့ ကြံဖတ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သံယောဇဉ်နဲ့ မြတ်နိုးတတ်ဖို့ တော့ လိုတယ်။
အချစ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကိုမောင်းနှင်ထားတဲ့ လောင်စာ
အချစ်ဆိုတာ ငါတို့ ကို အကျဉ်းချထားတဲ့ ထောင်ပါ။
အချစ်ဆိုတာ ကျွံမိရင် ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် နေရတော့မယ့် စခန်း
အချစ်ဆိုတာ ဂငယ်ကွေ့  ပြန်ကွေ့ ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ လမ်း။
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မတိတ်မယ့်မိုး
ချောချော လှလှလေးတွေကို မြင်ရင် အသည်းနှလုံးဆိုတာ နိုးတတ်တယ်။
အချစ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ စပြီးပျိုးခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ်
သံယောဇဉ် နွယ်ပင် လေးတွေကို စုချင်တယ်။
အချစ်ဆိုတာ လုံခြုံမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အမိုး
အချစ်ဆိုတာ လူအလစ်ကို စောင့်နေရတဲ့ သူခိုး။
အချစ်ဆိုတာ ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုးနဲ့ မှန်းဆရ ခက်တဲ့ မိုးတိမ်
အချစ်အကြောင်းကို ဖွဲ့ လိုက်တိုင်း ကိုယ့်လက်ကိုယ် စိုးရိမ်တယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 12:54 PM
Labels: အချစ်ကဗျာ,ွှ့Thief
စိတ်ဓါတ်တွေကတော့ဗျာ.. သူ့ကိုယ်သူတော့ မကောင်းမှန်းသိနေပုံရတယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်သည်းခံဖတ်ပေးလို့ ပြောတာလားမှမသိတာဗျ။ သူခိုးတွေက နေရာတိုင်းမှာရှိနေတာပါပဲ။ အမောင်ကောင်းကင် အစိတ်လျှော့..အစိတ်လျှော့
fight fight fight! that kind of Kants are f--king rubbish! i have had similar drama in the past!
ပေါ်တင်ကြီးကို ခိုးထားတာပဲ အတည်ပေါက်ကြီးနဲ့း) ဟာသပဲဗျ ပြောတော့ပါဘူး :P
ဘာလို့များ အနုပညာဝင်ကစွတ်တွေ ရှိနေကြပါလ်ိမ့်...
ကိုယ်ကိုတိုင် မဖန်တီးဘူးလို့ သူများဖန်တီးတာကို တန်ဖိုးမထား တတ်ကြတာလား မသိဘူး..
စာပေစည်းကမ်းတော့ ရှိဖို့တော့ လိုအပ်နေပြီဗျာ။
အင်း စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ my suboo admin ကို မေးပို့ကြည့်ပါလား. ဖျက်ပေးဖုို့ကို. Suboo က Planet တို့နဲ့တူတူပါပဲ company တစ်ခုထဲကပါ
အကို ကဗျာတွေက အရမ်းကောင်းတာကိုး
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတဲ့ သူတိုင်းဟာ
အဲလို ခိုးတဲ့ အလုပ်မျိုး မလုပ်ဘူး...
အဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုယ်ကိုတိုင် ဘာတခုမှ ဖန်တီးတဲ့ပုံ မရှိပါဘူး....
ဒါကြောင့်မို့ သူတပါးသားသမီးကို ခိုးသွားတာပဲ....
အရှက်ဆိုတာရော သိရဲ့လားတောင် မသိ...
ကွန်မန့်ကျတော့လည်း ဒီအတိုင်းပေးလို့မရအောင် လုပ်ထားသေးတယ်...
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး အစ်ကိုရေ..
ကျွန်တော့်မေးလ်ကို တစ်ခါတစ်ခါရောက်လာရင်လည်း ကဗျာဆရာနာမည်လေးပါ တပ်ပေးဖို့ reply ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒါဟာ အင်တာနက် အသုံးပြုသက်တမ်းနိမ့်သေးလို့ copyright ဘာညာ မသိလို့ ခွင့်လွှတ်နိုင်သေးတယ်.. နာမည်ပြောင်းတပ်တာကတော့ သိပ်လွန်လွန်းတယ်ဗျာ.. (ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုယ်ပိုင်အနုပညာကို အဝေဖန်ခံ၊ ချီးကျူးခံ မျှော်လင့်ပြီးရေးသားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ ရလာတဲ့ အကျိုးဆက်ကိုတော့ ကိုယ့်ကလောင်နဲ့ပဲ ခံယူချင်တာပေါ့..) ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုတော့ လုံးဝကို လက်မခံနိုင်ဘူး.. လူအထင်ကြီးခံချင်တဲ့စိတ်တွေ အဲဒီလောက်ပဲ များနေကြလား..
စိတ်မကောင်းတာထက် ကိုယ်လေးစားအားကျရတဲ့ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ကို စော်ကားသွားတဲ့အတွက်ပါ ပိုဒေါသဖြစ်ပါတယ်
စုဗူး က အက်မင်တစ်ချို့ကို အစ်ကိုသိပါတယ်
မေးလ်ပို့ ပြီးပြောကြည့်လိုက်ပါ အနည်းဆုံးတော့တောင်းပန်သင့်တယ် ဖျတ်ပေးတယ်ဆိုတာထက် တောင်းပန်ပြီး ၀န်ခံရမှာ
ကဗျာ တစ်ပုဒ်ဖြစ်တည်လာဖို့ လွယ်ကူတဲ့ အလုပ်မှ မဟုတ်ဘဲဗျာ။ ကဗျာဆရာဆိုတာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖို့ ရင်ဘတ်နဲ့ရင်းရေးရတာ။ ကဗျာကို ချစ်ရင် လေးစားရင် တန်ဘိုးထားရင် မြတ်နိုးရင် ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး။ လုပ်ခွင့်လည်း မရှိဘူး။ ဒီလူတွေ ဘယ်လိုလူတွေလဲဗျာ။
အနုပညာကို မဖန်တီးတတ်ရင်လည်း သူများဖန်တီးတဲ့ အနုပညာကို ခိုးချဘို့ လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူး။ ကဗျာဆရာဘက်မှာ ကဗျာဆရာတွေ ရှိတယ် ကိုကောင်းကင်ကို။ ချဗျာ။ အဲဒီလို ခိုးတာမျိုးကို လုံးဝ စက်ဆုပ်ရွံရှာစွာ ရှုတ်ချတယ်။ ဒီလိုလူတွေ ရင်ဘတ်နဲ့ ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ရဲ့ရပ်ဝန်းမှာ မရှိသင့်ဘူး။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လင့်ခ်ပေးလို့ ပထမနေ့က သွားဖတ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ဗျ။ comment ဝင်ပေးဖို့တောင် စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်။ မကောင်းဘူးဗျ နော။
ဘယ်လိုလူတွေပါ့လိမ့်ဗျာ ။ ကြောင်တောင် နှိုက်ရဲတယ် ။လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။ ကိုကောင်း လိုက်ရှင်းဗျာ ။ ဓာတ်ပိန်တယ်။း(
ဒီလိုလူတွေ.. ဒီလိုစိတ်ဓါတ်တွေကို စက်ဆုပ် ရွံရှာ မိတယ်ဗျာ..
အကြံတစ်ခုပေးမယ်ဗျာ.. ဘလော့ကို Disable Right Click လုပ်ထားလိုက်ဗျာ.. အေးရော.. (ဘောပင်နဲ့ ထိုင်ကူးသွားရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ..)
ကိုယ့်စာလေးတွေ၊ ကဗျာလေးတွေကို အမှတ်တရ သိမ်းထားချင်သူတွေ အတွက်တော့ အားနာစရာပေါ့..
ဒါပေမယ့် အခုလို သူခိုးတွေရဲ့ ဖျက်လိုဖျက်စီး ရန်ကတော့ ကာကွယ်လို့ရတာပေါ့ဗျာ..
ဒီမှာ ကုဒ် ယူလို့ရတယ်ဗျ..
ကျွန်တော်လဲဒီလိုဘဲခံရဘူးပါတယ်...ကူးယူသွားပြီး သူ့ဘလော့မှာတင်ထားလိုက်တယ်..ပြီးတော့သူဘဲ ရေးသလိုလိုနဲ့ လုပ်တာခံလိုက်ရတယ်...ကိုရီးယားအလုပ်သမားသတင်းလေးပါ။ဦးဦးဖျားဖျားသတင်းလေးတိုလေးကို ဘာသာပြန်ပြီး ဖြန့်လိုက်တာ...မြန်မာပြည်က တယောက်က ယူသွားပြီး သူ့ဘလော့မှာ တင်လိုက်တယ်...စီဘောက်မှာတော့ ယူသွားတယ်လို့ ရေးခဲ့ ပေမဲ့ သူ့ဘလော့မှာ ဘယ်သူဆီကယူလာတယ်လို့ မဖေါ်ပြတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့ခံလိုက်ရတယ်ဗျာ..အများနဲ့ဆိုင် တဲ့သတင်းဆိုတော့ ပြန်ပြောမနေတော့ပါဘူး..ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ...ကောင်းကင်လိုကျင့်..မြေကြီးလိုစိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာ...
အေးဗျာ စိတ်မကောင်းဘူး လူတွေကလဲ စံဘဲ ကိုယ်ဟာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဟာလုပ်ခြင်တယ် ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့လူတွေလုပ်နေကျ အလုပ်ဘဲ
ငါ့ညီရေ ပြောလို့မှ မဆုံးသေးဘူး အကို့ကဗျာကိုလည်း ဒီမှာ သွားတွေ့နေတယ် - http://koyandaw.blogspot.com/2008/12/blog-post_19.html ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ...
ဒါက အကို စရေးပြီး အားလုံးကို Tag ခဲ့တဲ့ ကဗျာ
ခုတော့ ကွန်မန့်မှာ သွားပြောထားတယ်- ဆီပုံးမှာလည်း အော်ထားတယ် - မေးလ်လည်း ပို့ထားတယ်
ပန်ဒိုရာလည်း တခါ ဖြစ်ပြီးပြီ - ကိုယ့်ညီလည်း အခု ဖြစ်တယ် - ပြောလို့မှ မဆုံးသေးဘူး အကို့ ကဗျာလည်း ပါသွားပြီ....
စိတ်မကောင်းပါ ကိုယ်ချင်းစာပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ "သတိ ခါးပိုက်နှိုက်တတ်သည်" ဆိုတာလေးလဲ Google မှာ ရေးပြီးကထဲက ရှာကြည့်တာ ဟိုမှာဒီမှာတွေ့လိုက်ရပါကြောင်း။ ဟိုးအရင်ကထဲကလဲ တခြားနာမည်ကြီးတွေရဲ့ ပို့စ်တွေလဲ ဒီလိုဘဲ အသစ်ကလေးတွေက အီးမေးကရလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကူးကြလေတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဖြစ်နေဦးမှာပါဘဲ နောင်လဲ။ သူတို့မှာလဲ ကိုယ့်ဘာသာမှ အားမထုတ်နိုင်ရှာဘဲလေ ဆိုပြီး သနားစွာနဲ့ လှည့်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကဗျာလေးကို ဘယ်မှာတွေ့ တွေ့ မှတ်မိနေမှာ… ကောင်းကင်ကိုရဲ့ လက်ရာလေးကို ဖတ်ချင်လို့ အမtagခဲ့တာကိုး… ကောင်းကင်ကိုမှာ ကောင်းကင်ကို မူပိုင်ဟန်ရှိတယ်… ဘယ်မှာသွားတွေ့ တွေ့နာမည်မထိုးထားလဲ ဒါကောင်းကင်ကို လက်ရာပါလို့ ပြောလို့ ရတယ်… အဲဒါကြီးကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး လုပ်ရဲတာ အတော်ရှက်စရာပါ…
ကိုယ်ချင်းစာတယ်အစ်ကိုရေ..။ တစ်ခါလဲ ကျွန်တော်ဖြစ်ဖူး တယ်..။ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ "အချစ်ကို ခိုးယူစားသုံးကြသူများ" ဆိုတဲ့ပို့စ်ကို "မိန်းကလေးတို့ သဘာဝ" ဆိုပြီး လုပ်ချသွားတာ...။ အကုန်ကူးတယ်..။ အစကနေ အဆုံး...။ ကျွန်တော့် ညီတစ်ယောက်ပြလို့ သွားကြည့်တော့ သူက သူရေးသလိုကြီးလုပ်ထားတာနဲ့ ကျွန်တော် ကော်မန့်မှာ ပြေရာပြေကြောင်းရေးခဲ့တယ်..။ နောက်တော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ဘလော့ဂါ မောင်နှမ တွေကပါ သိသွားပြီး ၇ ယောက် ဂ ယောက်လောက်ရှိမယ် ဆီဗုံးနဲ့ ကော်မန့်တွေမှာ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးဖို့ သွားပြောကြတယ်..။
ဟဲ ဟဲ ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ.. သကောင့်သားက နောက်နေ့လဲကြရော ပို့စ်တွေရော၊ ကော်မန့်တွေရော၊ ဆီဗုံးက ဟာတွေရော အကုန်ရှင်းထုတ်ပြစ်လိုက်တာ..။ ကျွန်တော်လည်း ပြဿနာမရှည်ချင်တာနဲ့ ဘာမှမပြောပဲ ထားလိုက်တာ...။
သူမသိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်..။ ဟဲ ဟဲ..။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ့ ဘလော့တစ်ခုလုံးကို Print Screen လုပ်ပြီး Hard Copy ယူထားတယ်ဆိုတာကိုပဲ :) အစ်ကိုလဲ လုပ်ထားသင့်တယ်...။ တော်ကြာသူတို့က ကျွန်တော် အခုဖြစ်သလို ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ကောက်ဖျက်ပြီး ...။ ဘယ်မှာလဲ မခိုးပါဘူး ဘာညာနဲ့..။ သူခိုးကလူပြန်ဟစ်နေရင် ပိုဒေါသထွက်ရမယ်...။ အမှတ်တရ ကျွန်တော့် ပို့စ်ကို ခိုး...အဲမှားလို့ :P ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ကူးပြီးလုပ်စားသွားတဲ့ ဘလော့ လင့်ကို ပေးခဲ့မယ်အစ်ကိုရေ...။ သတိထားလို့ရအောင်...။
ဒါက အရင် သူ ခိုး...အဲလေ ကူားထားတဲ့ လင့်ပါ အခုမရှိတော့ပါဘူး ပို့စ်ဖျက်လိုက်ပြီ...။
ဒါကတော့ သူ့ဘလော့ Link ပါ
စိတ်မကောင်းပါဘူး ကိုကောင်းကင်ကို ..
မပန်နဲ့ ကိုအောင်သာငယ် ဘလော့ဂ်မှာသက်ဆိုင်ရာ ပိုစ့်တွေတွေ့ လို့ အစ်ကို့ ဆီလည်း ရောက်လာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကြားရတာ နားထဲ သံရည်ပူလောင်းသလိုပဲ..
(သူ့)နာမည်တပ်ပြီး ကဗျာကို ပြင်လိုက်တာကတော့ ခွင့်လွှတ် စရာမကောင်းဘူး ။ ခံစားချက်မရှိရင် တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးရကောင်းမှန်းလည်း မသိကြဘူး ။ နင့်နေအောင် မြတ်နိုးမှ နင့်နေအောင် ခံစားတတ်တာကလား ။ နောက်ထပ်မကြုံရပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆန္ဒပြုပေးနိုင်တော့တယ် ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အပြစ်တင်တော့ ကေိုာင်းရေ။ သိတ်ကောင်းအောင်ရေးတာကိုးဗျ။ မကောင်းရင် ဘယ်ခိုးမလဲ ဟဲဟဲ :)
ဆိုးတယ် ညီရေ။ အနုပညာကို အခိုးခံရတာတော့ လုံးဝမမိုက်ဘူး။
အစ်ကိုရေ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကဗျာလေးကလည်း ကောင်းတော့ ကျင့်ဝတ်နားမလည်တဲ့သူတွေက လုပ်စားသွားတာပေါ့။ ဂျင်အရက် နဲ့အစဉ်အဆက် ဆိုတာလေးကို အတွေးရော အဖွဲ့ လေးပါ ကြိုက်တယ်။ ခင်မင်လေးစားလျက်။
ခင်ဗျားပြောသလို ကျနော်လဲ စစ်ကြည့်လိုက်တာ
ကျနော့ ဟာလဲ ခိုးခံလိုက်ရပါတယ်..
စုဗူး မှာ သူခိုးတွေ စုမိနေပြီ ...။
အဖြစ်ချင်းတော့တူနေပြီဗျာ...ဘယ်လိုတောင်ပြောရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး ကိုအောင်သာငယ် ကျနော့်cboxမှာ လာပြောပြသွားမှပဲ ကျနော့်ကဗျာလည်း စုဗူးမှာ ခိုးချခံထားရတာ တွေ့ရတော့တယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ ဒေါသလည်းဖြစ်မိတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူးဗျာ
ps ကိုအောင်သာငယ်ကို လာပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ
ဒွတ်ခ သူများအားထုတ်ထားတဲ့ အနှစ်သာရကို ခိုးတဲ့လူတွေကလည်း ပေါ်တင်ပါလား။ အခုလို ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောတာမှန်ကန်ပါတယ်။ အကို့ရဲ့ အနုပညာကဗျာစွမ်းအားကို သိပြီးသားသူတွေအတွက် ဖတ်မိတာနဲ့ ခန့်မှန်းမိမှာပါ။
အေးဗျာ... ဘာလို့ မရောင့်ရဲနိုင်ကြတာလဲ မသိပါဘူး။
ကဗျာ ရေးလို့ မတတ်ရင်လည်း မရေးပဲ နေကြပါလား... လူတစ်ယောက်ဟာ ထူးချွန်တဲ့ဖက် တစ်ဖက်တော့ ရှိမှာပါ။ ကဗျာ ရေးတာက အဆင်မပြေမှန်းသိရင် တခြားဟာနဲ့ ကြိုးစားပေါ့။
သူများ ကဗျာ ရေးတဲ့ဖက်မှာ ထူးချွန်တာကို ကိုယ်လဲ အဲလို ထူးချွန်ချင်သဆို... ကိုယ်လည်း များများဖတ်၊ များများရေးပြီး ၀မ်းစာပြည့်အောင် မကြိုးစားပဲ အခုလို နာမည်လေး ပြောင်းတပ်တာကတော့ မကောင်းဘူးလို့ မြင်မိတယ်...
ဒါပေမဲ့.... အင်း... အဲဒါလည်း သူ့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ထူးချွန်မှု မို့လို့ဖြစ်မှာပါ...
ကောင်းကင်ကို ရဲ့ အချစ်ဆိုတာ ကဗျာ ကို
မြန်မာပြည်က ဖေဖေါ်ဝါရီ ထုတ် မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်ထဲ လဲ တွေ့လိုက်မိတယ်..
အဲဒါ ကရော.. ကဗျာ ဆရာ ခွင့်ပြု ချက်နဲ့ ပဲလား..